प्रदेश समाचार | BARDIYA ONLINE |
सोम गुरुङ,नेपालगन्ज। बाँकेको विकट क्षेत्र मानिएको नरैनापुरमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि प्रथम नरैनापुर दौड २०७५ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक र बत्तीसंगै आवश्यक पुर्बाधारको अभावमा सो क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन भने, अशिक्षा गरिबीले पनि पछाडी परेको क्षेत्रको रुपमा नरैनापुर चिनिन्छ । सो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि खेलको माध्यमले सन्देश प्रवाह गरिने [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज, बाँके । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै मातहतमा काम गर्ने एक अधिकारीलाई घुस सहित नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको छ । अदुअआ केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको अख्तियारकै बिशेष टोलीले अख्तियारको विशेष अनुसन्धान टोली सुर्खेतमा कार्यरत असई जन्मदेव जैसी अधिकारीलाई आइतवार साँझ पक्राउ गरेको हो । जैसीको साथबाट लिदैगर्दाको चार लाख घुस समेत बरामद गरिएको बताईएको छ । [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्जमा फाल्गुन १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म ‘प्रादेशिक महोत्सव २०७५’ हुने
नेपालगन्ज, बाँके। नेपालगन्जमा फाल्गुन १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रादेशिक महोत्सव २०७५ हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुन लागेको प्रादेशिक महोत्सव २०७५ लाई भब्य रुपमा सफल बनाउन आईतबार एक कार्यक्रमका बिच सचिवालयको उद्घाटन गरिएको छ । संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले संघकै भवनमा महोत्सवको सचिवालय उद्घाटन गरेका हुन । सचिवालय उद्घाटन गर्दै बैश्यले स्थानीय उत्पादनको [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज, बाँके। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर आज शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बिहीबार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ । बैठकमा नेकपा सम्बद्धहरुले भने सार्वजनिक बिदाको पक्ष मत दिएनन् । नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले दिएको जानकारी अनुसार, नगर कार्यपालिका भित्र [पूरा पढ्नुहोस्]
बुटवल,रुपन्देही। प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जले ओगटेको जनताको आवादी जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग उठेको छ।प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा बुधबारको वैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै बर्दिया २ (ख) का सांसद दीपेश थारुले यस्तो माग गरेका हुन् । निकुन्जको पश्चिम सिमानामा रहेको गेरुवा नदीको कटान र बाढीले नदी फैलिएर [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्जकी अन्नुलाई आमाको नामबाट नागरिकता
सोम गुरुङ,नेपालगन्ज। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.११ का अन्नु मौर्यले आमाको नामबाट वंशज नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी छन् । अन्नुले नेपाली नागरिकता नपाए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ‘मैले नागरिकता कहिलेसम्म पाउँछु?’ भनी सूचना माग गरेकी थिईन । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले मौर्यलाई [पूरा पढ्नुहोस्]
बुटवल। ५ नम्बर प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तिको अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले माघी पर्व (माघे संक्रान्ति) को अवसरमा माघ १ र २ गते प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश ५ मगर र थारु जातिको बाहुल्यता रहेकोले प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तीको अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रदेश [पूरा पढ्नुहोस्]
चितवन। रत्ननगर नगरपालिकाले गाईभैँसीलाई बिहीबार सुत्केरी भत्ता दिएको छ । गत साउन र भदौमा ब्याएका ७५ वटा गाईभैँसीलाई बिहीबार सुत्केरी भत्ता दिएको छ । पशुपालक किसानलाई सुत्केरी भत्तास्वरूप पाँच सय रुपैयाँ दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई हजार सुत्केरी गाईभैँसीलाई भत्ता वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सुत्केरी पशुलाई पौष्टिक आहार [पूरा पढ्नुहोस्]
सोम गुरुङ्ग, बाँके। नेपालगन्ज मेयर कप साइकल दौड प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा बुद्धि बहादुर तामाङ्ग प्रथम भएका छन् । उनले ५५ किलोमिटरको दुरी १ घण्टा ५७ मिनेटमा पार गरेका छन् । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमसेर राणाले प्रतियोगिताको उद्घाटन सिट्टी फुकेर गरेका थिए । नेपालगन्ज नगरपालिकाको सहयोगमा नेपालगन्ज साइक्लिङ क्लवले आयोजना तथा नेपालगन्ज फोटो वाकरर्सको [पूरा पढ्नुहोस्]